Ithegi:-oda kwakhona | Martech Zone
Ithegi: oda kwakhona
I-TxTFi: Nika amandla ukuThengwa kwakhona kweVenkile yokuGqithisela umyalezo obhaliweyo
NgoLwesibini, Septemba 29, 2020 NgoLwesibini, Septemba 29, 2020 Douglas Karr
Uku-odola kwakhona ngomyalezo obhaliweyo kuyabiza kwaye kuyasebenza ngakumbi ekufumaneni iodolo yesibini okanye yesithathu kwisiseko esikhoyo sabathengi bakho. Sika yonke ingxolo-vumela abathengi bakho baodole apho kwaye baziva bekhululeke ngakumbi. Nge-TxTFi ye-Shopify, akukho mfuneko yokuba wenze nantoni na. Zonke zizenzekelayo. Misela nje kwaye ulibale. Ii-odolo zeSMS zeShopify zeTxTFi plugs kwiVenkile ezenzekelayo kwaye zifikelela kubathengi bakho nge